Literary | Myanmar My Always
အောက်က ဝတ္ထုတိုလေးကို မှီပြီး Tie A Yellow Ribon Round An Old Oak Tree ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပေါ်လာခဲ့၊ ကြော်ကြားသွားခဲ့တယ်။ ဂျပန်ပြည်မှာတော့ ကင် တကကူရဆိုတဲ့ အကျော်အမော်မင်းသားနဲ့ ရုပ်ရှင်တကား ဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ “အိမ်ပြန်လာ တပေါင်းကလေး ချစ်စရာ နွေ” ဆိုတဲ့ စတီရီယိုတေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားပြီး ကြော်ကြားခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီသီချင်းကို ပိ(တ်) နဲ့ အခြားတစ်ယောက် တွဲရေးတာလို့ ထင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်လောက်ကထင်တယ်၊ … Continue reading →
ချယ်ရီပွင့်လေးတို့ရေ မျက်ရည်ဝေဝေ တစမ်းစမ်း ရင်နင့်နင့် အလွမ်းတွေနဲ့ မပွင့်ခင် ကြိုတင်နမ်းခါ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ မွေးရပ်မြေကို ခွဲခွါ ၂၂ နှစ်ကြာကာလမှာ ၂၁ နှစ်ကျော်ဟာ ချယ်ရီမြေမှာ အိပ်စက် အိပ်မက်တွေ အိပ်မက်တွေ မက်ပြီးရင်းမက် မရေမတွက်နိုင်အောင်မက်လို့ အိမ်လွမ်းရက်တွေ ရှည်ခဲ့တာ သက်သေထူစရာ လိုဖူးထင်ပါ့ကွယ်။ ခုတော့ ကိုယ်ပြန်တော့မယ် ဘယ်နံရောခါ ပြန်ဆုံမလဲ ဒီဘုံ ဒီဘဝထဲမှာ တဝဲလည်လည် လည်ကြဦးမယ်ဆိုရင် အသေအချာပေါ့ တစ်နေ့မှာ ပြန်ဆုံမယ်။ ချယ်ရီပွင့်လေးတို့ရေ . . . မျက်ရည်တွေနဲ့ … Continue reading →
မြို့ရဲ့မီးလောင်ပြင်မှာ ညကရွာထားတဲ့မိုး နုညံ့မွေ့ညက် မြူခိုးတွေတက်နေ။ ခရစ္စမတ်သံပြိုင်တေးဟာ ထာဝရဘုရားရဲ့အသံပမာ ငါ့ရင်ထဲမှာ လင်းလက်နေရဲ့။ သူငယ်မလေးနဲ့ ငါဟာ မီးလောင်ပြင်ထဲက ဓာတ်ရထားလမ်းတလျောက် စကားမပြောပဲ တိတ်ဆိတ်စွောလျှောက်ခဲ့။ ။ စစ်ကြီးအပြီး အဦးအစ ခရစ္စမတ်ဟာ မီးကြွမ်းလောင်ထားတဲ့ ရနံတူးတူးတွေ မချိစရာတွေကြားထဲက ထာဝရဘုရားသခင်ဟာ မုန့်ချိုပွဲ တစ်ပွဲပမာ လှပလိုက်ပါဖိ သူငယ်မနဲ့ ငါဟာ ရွှံ့ညွံဗွက်တောပေါ်ကနေ ဂျွမ်းဘားမောင်မယ်များပမာ ဖြတ်ကျော်လို့လာခဲ့။ ။ ဖြတ်လို့သွားတော့ အနုမြူဗုံး မီးလောင်ပြင်ဟာ … Continue reading →
အလွမ်းကဗျာ Forlornness & Pain
Posted on February 26, 2012	by nyuntshwe
အချစ်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်ရင်ဖြင့် မချစ်ချင်တော့ဘူးကွယ် ရင်ထဲမှာ လဲလွမ်းတယ် ဘဝထဲမှာလဲ လွမ်းတယ် အတူ လျှောက်လှမ်းတုန်းက ပြုံးပျော်ကြည်နူးမိသလောက် တစ်ယောက်ထဲ ကျန်တဲ့အခါ ဝေဒနာက ကဋေကဋာပါလားကွယ် . . . ငါ ဒီတောကို မဖြတ်ချင်တော့ဘူး ငါ ဒီတောင်ကို မကျော်ချင်တော့ဘူး ရူးမတတ်ချစ်ခဲ့တာ ရူးမတတ်ခံစားရတာနဲ့ ဆုံးခဲ့တယ်။ အချစ် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ၊ မိမောင် ၂၆ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၂ (သေတပန်သက်တဆုံး မောင့်လက်ကို တွဲမယ်လို့ အဖြေပေးခဲ့တဲ့ ၄၅ နှစ်နဲ့ … Continue reading →
(ကဗျာဆရာတင်မိုးရဲ့ကဗျာနဲ့စာကို ချစ်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအတွက် တင်မိုးရဲ့အက်ဆေးတွေ၊ စာစီစာကုံးတွေထဲမှာ ကျနော်အင်မတန်မှ နှစ်ခြိုက်တဲ့ “သင်္ချုံင်းကုန်းအတွေး” ကို ကျနော် တတ်သလောက် မှတ်သလောက် အင်္ဂလိပ်စာဗဟုသုတနဲ့ ကြိုးစားပြီး ဘာသာပြန်ဆို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်လှမ်းမီရာ အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ပုရိတ်သတ်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးမယ်ဆိုရင်လဲ အထူးကျေးဇူးတင်ရမှာပါခင်ဗျား၊ (မြသန်းညွန့်) “The Graveyard Thought” Tin Moe (Poet Laureate of Burma) (1) There … Continue reading →